Bụ Apple 5 GB Of Free iCloud Nchekwa n'Ezie A emesapụ Aka Nye
iCloud Atụmatụ & Aghụghọ
1 Idozi nkịtị iCloud mbipụta
1.1 ugboro ugboro iCloud ịrịba ama-na arịrịọ
1.2 iCloud nche mbipụta 10
1.3 iCloud Nchekwa
1.4 Jikwaa multiple iDevices na otu Apple ID
1.5 Common iCloud mmekọrịta mbipụta
1.6 Bypasss iCloud mkpọchi
2 Mbido iCloud
2.1 Mbido iCloud Photo Ịkekọrịta
2.2 Mbido iCloud Document
Ma gụọ 2.3 ịgbanwe iCloud e-mail
2.4 mmekọrịta Outlook na iCloud
3 ndabere & Weghachi na iCloud
3.1 Mbido iCloud ndabere
3.3 Download iCloud ndabere
3.4 ndabere iPad ka iCloud
3.5 ndabere iPhone ka iCloud
3.6 Weghachi si iCloud ndabere
3.8 ndabere iPhone Notes
3.9 ndabere iPhone Photos
4 iCloud Aghụghọ
4.1 Nhichapụ iPad Aaccount
4.2 Wepụ ngwaọrụ site na iCloud
4.3 Re-download Songs si iCloud
4.4 Hichapụ ngwa site iCloud
4.5 iTunes na iCloud Backups
Ojii nchekwa ka simplified ndụ nke ọtụtụ. Na Apple si iCloud ọrụ, ị nwere ike chekwaa a otutu faịlụ gụnyere foto na ọbụna akwụkwọ gị iCloud akaụntụ.
E nwere ọtụtụ ndị na-e-ada azụ Apple si iCloud nchekwa n'ihi nke na-azọpụta ha faịlụ. Otu nke kasị mma atụmatụ bụ na mgbe ị zụrụ songs, ị nwere ike remotely echekwa gị song Ọbá akwụkwọ na na mmekọrịta atụmatụ, ị nwere ike ịnweta otu faịlụ gị niile ejikọrọ Apple ngwaọrụ. Mgbe iCloud kemgbe a kemmenyeujo ọrụ, ọ bụ ewekarị ya òkè nke nsogbu. E nwere mbipụta mgbe siri mere mkpesa na ha onwe photos e leaked ha iCloud akaụntụ. Otú ọ dị, n'otu oge, ọ na-enye ụzọ magburu onwe nke ịnweta otu faịlụ na concurrent ngwaọrụ na ịrịba ama ala.
Nso nso a, Apple anọwo na ozi ọma dị ka ọ na-àjà Grik ahịa free iCloud ohere maka otu ọnwa. Nke a bụ N'ezie a ezi enyemaka dị ka ndị Grik na-aga site nnukwu ego nsogbu n'oge ahụ.
Jikwaa iCloud Nchekwa
1. On gị iPhone, ịkwaga ntọala taabụ ma wee pịa na iCloud.
2. Ugbu a, ị ga-ahụ ndepụta nke nhọrọ dị ka ezinụlọ nkekọrịta, dịnụ ohere na na ngwa ọdịnala na-akwado data gị iCloud akaụntụ.
3. I nwere ike isi na nchekwa ngalaba na ma họrọ a ọhụrụ atụmatụ (nke ga-eri gị ego) ma ọ bụ i nwere ike ịpụ na jikwaa nchekwa site ihichapụ ụfọdụ data.
4. Ị nwere ike pịa on 'jikwaa nchekwa' nhọrọ na ị ga-ahụ ndepụta nke dị iche iche ngwa.
5. Ị nwere ike enweta na ụfọdụ ngwa ọdịnala onye data na ị chọrọ doro anya.
6. Ukwuu n'ime, na-ekpocha foto ga-enyere gị free ọkpụrụkpụ ego nke ohere nchekwa.
7. Mgbe ị na-eme na ndị a, jide n'aka na-ego na iCloud akpaaka ndabere agbanwuru.
-Eso ndị a ga-enyere gị ọcha gị ohere nchekwa na-esochi nke data nke ị kwadoo.
Ị na-achọ inyocha ihe ndị ọzọ na nhọrọ ndị ị na-enwe mgbe ọ na-abịa ojii nchekwa? Ezie na e nweghị ihe ịrụ ụka na iCloud awade kemgwucha ịja mma oke, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-akpali akpali nhọrọ dị ka mma. Ka anyị a lee anya na ụfọdụ n'ime ha.
Ọ na-enye 2 GB nke free ígwé ojii ohere ọ bụla onye ọrụ ma ị nwere ike n'ihu ịgbatị gị free ohere site ezo Dropbox ka ndị ọzọ ọrụ. Dị ukwuu dị ka mmezi 16 GB nke free ohere nwere ike nweta. Ọ dị mfe iji na-akwado fọrọ nke nta niile nsụgharị nke sistem.
• na-agba na fọrọ nke nta niile nyiwe
• Easy ịgbatị free nchekwa site n'izo enyi
• Easy syncing na-ekere òkè ọdịnaya na ndị ọrụ ndị ọzọ
• ịbụ ka nche mbipụta
• Hacker nwere ike mfe agbaji n'ime gị Dropbox akaụntụ na-ezu ohi data
Nke a bụ a dịtụ ọhụrụ ngwá ọrụ ma ọ ka jisiri-eme ka ya edidu chere. Ị ga-esi 15 GB nke free ohere nchekwa na ya n'ezie na-ọhụrụ ọkọlọtọ n'ihi na-ekere òkè faịlụ na ọrụ.
• whopping 15 GB nke free nchekwa
• Easy mwekota na Gmail nke na-eme ọ fọrọ nke nta oké mkpa maka ojiji
• na-agba na ọtụtụ nke dị iche iche OS nsụgharị
•-akwado ọtụtụ nkwụnye ins nke pụrụ ime ka ọ dị ike
• dịtụ ọhụrụ na ụfọdụ ndị na-enwe obi abụọ nke na-eji ya
• Upgrading ohere nwere ike ịbụ n'ezie oké ọnụ
• Ọ na-adịghị họọrọ site ndị na-adịghị eji Gmail dị ka ha bụ isi mail akaụntụ
Nke a ojii nchekwa site Microsoft bụ n'ezie ọzọ oké ọrụ nke na ị ga-inyocha. Ị ga-esi 7 GB nke free ohere nchekwa n'elu edebanye na ọ bụ ezie na ọ na-tumadi wuru maka Windows n'elu ikpo okwu, ị pụrụ inweta nkwado maka ndị ọzọ OS dị ka mma.
• 7 GB nke free ohere, 10 GB maka ụmụ akwụkwọ.
• ndị họọrọ iji wụnye ya mgbe ọ bụ na beta na-adọ nwetara 25 GB nke free ohere nchekwa
• Easy-echekwa faịlụ na-edebe ha synchronized dị ka ị nwere ike ịnweta ha na ọ laa
• Ò Kwekọrọ n'Ozizi android na iOS nyiwe nakwa
• akwado iche iche ọzọ ngwá ọrụ na APIs nakwa
• The interface bụghị nnọọ ọrụ enyi na enyi
• Ọ nwere ike na-ewe oge ịlụ eji na atụmatụ
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu nchekwa ọrụ n'etiti azụmahịa nwe. Ị ga-esi 10 GB nke free ohere maka onwe gị eji. Ọ bụ dakọtara na iche iche nyiwe dị ka mma.
• 10 GB nke ego nchekwa n'elu edebanye
• Best ruru eru maka azụmahịa enterprise ụdị
• Ị nwere ike nanị bulite faịlụ nke max size 250 MB ihe onwe onye akaụntụ
• Ọ pụrụ ịbụ obere ọnụ ịzụta mmezi ohere
Nke a bụ nnọọ mma ígwé ojii ọrụ. Awa site Apple, ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu ojii nchekwa nhọrọ. Ị ga-esi 5 GB nke free nchekwa.
• nnọọ mma interface nke na-adịghị ewe oge ịlụ-eji ya
• 5 GB nke free ohere nke nwere ike ịgbatị
• ịbụ ka nche ọgụ
• ngwangwa egwu
Ndị a bụ nke 5 nke kasị mma ojii nchekwa ọrụ. Nke onye ị na-ahọrọ?
Olee otú Jiri iCloud
Olee otú Naghachi Ndi ana-akpo si iCloud
Olee otú iji weghachi iOS na iCloud ndabere
Olee otú Ị kpọghee ekwt iPhone passcode
Olee otú Naghachi Photos si iCloud
Olee otú Wepu ehichapụ Text on iPhone
Ihe I Kwesịrị Ịmara tupu ịzụrụ a eji iPhone
Atụmatụ & Aghụghọ iji Hichapụ faịlụ na iPhone
Olee otú Wepụ Videos si iTunes ndabere
Olee otú iji weghachite Data si iCloud
Gịnị Celebrity Photo ntapu Pụrụ Ịkụziri Anyị
Olee otú ka Wepụ iCloud Akaụntụ na ma ọ bụ na-enweghị Paswọdu
Olee otú Hichapụ ngwa site iCloud
Olee otú Kagbuo iCloud nchekwa atụmatụ
Olee otú Jiri na-azọpụta Documents na iCloud
Olee otú mbupụ iCloud Ndi ana-akpo ka Outlook
> Resource> iCloud> Bụ Apple 5 GB nke Free iCloud Nchekwa n'Ezie a emesapụ Aka na-enye?